Subnet ခွဲဖို့ [Networking]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » Subnet ခွဲဖို့ [Networking]
1 Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 22nd September 2009, 9:43 pm
Networking မှာ Subnet Mask ခွဲပြီးသုံးချင်ရင် subnet mask လိုက်တွက်နေရတာဟာတစ်ဒုက္ခပါ..........
အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့Subnet Mask ခွဲတဲ့ software လေးပါ..........
[You must be registered and logged in to see this link.] မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
2 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 27th September 2009, 8:55 pm
Subnet Mask ခွဲတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ ခင်ဗျ
3 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 27th September 2009, 9:02 pm
subnet ဆိုတာက အရှင်းဆုံးပြောရရင် IP ခိုးတာပါပဲ...........network တစ်ခုမှာ IP တစ်ခု
ဥပမာ 192.168.1.1 ဆိုရင်နောက်ဆုံး 1 မှာ 8bit ရှိပါတယ် subnet ဆိုတာက........အဲ့ဒီ ဟာကို
bit လျော့ သုံးတာပါပဲ
4 ပြောကြည့်အုံးမယ်နော်။ on 2nd January 2010, 5:07 pm
Subnet ခွဲတယ်ဆိုတာက 255.255.255.0 ဆိုတာမျိုးထဲကနေ များများထွက်လာအောင် ရှေ့က 255 ဆိုတဲ့ဟာတွေထဲကနေ လှမ်းချေးတာ။
ဒါမှများများထွက်လာပြီးသုံးလို့ရတာကိုး။နောက်ပြီး Security ပိုင်းကိုလဲအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လေ။သူများတွေက 255.255.255.0 ဆိုတဲ့
အချိန် ကိုယ်က 255.224.0.0/11 ဆိုပြီးသုံးလို့ရနေတာမျိုးပေါ့။မကောင်းဘူးလား။ကိုယ့် Subnet ကိုသူများတွေကချက်ချင်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်
10.0.0.0 10.0.0.1 to 10.31.255.254 10.31.255.255
10.32.0.0 10.32.0.1 to 10.63.255.254 10.63.255.255
10.64.0.0 10.64.0.1 to 10.95.255.254 10.95.255.255
10.96.0.0 10.96.0.1 to 10.127.255.254 10.127.255.255
10.128.0.0 10.128.0.1 to 10.159.255.254 10.159.255.255
10.160.0.0 10.160.0.1 to 10.191.255.254 10.191.255.255
10.192.0.0 10.192.0.1 to 10.223.255.254 10.223.255.255
10.224.0.0 10.224.0.1 to 10.255.255.254 10.255.255.255
အပေါ်ကဟာကိုသာကြည့် ကြည့်လိုက်ပါတော့။ဒါဆိုရင်တော့ အတော်လေးကို စဉ်းစားရလွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ IP တွေ Subnet တွက်တာတွေသေချာ
လေ့လာထားနော်။ ဒါမှ Cisco လိုဟာမျိုးကိုထပ်ပြီးလေ့လာလို့အဆင်ပြေမှာ (အကြံပေးတာနော်။အထင်မလွဲနဲ့) [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 3rd January 2010, 8:44 pm
တက်လို့သိလို့ ဝင်ပြောတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲဗျာ။ လွဲနေလို့ဝင်ပြောလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်သိထားတာနဲ့ မကိုက်လို့ဝင်ပြောတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
subnet ဆိုတာက အရှင်းဆုံးပြောရရင် IP ခိုးတာပါပဲ။
တကယ်တမ်း subnet တွကိတယ်ဆိုတာ network တွေကို ခွဲထုတ်လိုက်တာပါ။ ဥပမာပြောရရင်........
192.168.1.0 network မှာ ရှိမှာက 255 host ရှိမှာပါ။ ဒါတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါကို နှစ်ခြမ်းခွဲပြီးသုံးချင်ရင်......
subnet 255.255.255.128 ကိုသုံးပြီး 192.168.1.0 က network တခု 192.168.1.128 က network တခုဆိုပြီးရပါတယ် ။ အဲဒီလိုမျိုးတွေခွဲခြင်လို့ subnet ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေခွဲခြင်းအားဖြင့် ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့.....
ကျွန်တော် က ကျွန်တော် network ကို သုံးခြင်တာက 10 လုံးစာပဲ သုံးခြင်တာပါ။ တကယ်လို့ subnet မသုံးခဲ့ရင် ကျန်တဲ့ host တွေက အလကားဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် subnet 255.255.255.240 ကိုသုံးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ အဲဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက network ကြီးလေလေ၊ ပိုသုံးရလေလေပါ။ network တခုနှစ်ခုလောက်ကတော့ ပြသာနာမရှိပေမယ့် များလာရင် အဲဒါက ပြသာနာတက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် subnet ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုက အဲဒီ subnet ကို ကြည့်ပြီး network address နဲ့ broadcast address ကို တွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တက်လို့သိလို့ ဝင်ရောက်ပြောသည်ဟု မထင်စေလိုပါ။ ကျွန်တော် အထင်နှင့်လွဲနေသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
6 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 6th January 2010, 8:33 am
အစ်ကိုတို့ရေ ....subnetmask ခွဲဖို့....software down ဖိုlink ကိုတော့ရောက်ပါပီ........ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာဒေါင်းရမလဲမသိလို့ပါ...ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးကြပါ...ခင်ဗျာ...
7 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 6th January 2010, 8:55 am
subnetmask ခွဲတဲ.အပိုင်းကို သေသေချာချာသိနိုင်တဲ. မြန်မာစာအုပ် ၇ှိ၇င်တင်ပေးကြပါနော်
8 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 6th January 2010, 6:41 pm
အစ်ကိုတို့ရေ ....subnetmask ခွဲဖို့....software down ဖိုlink
Download link က expired ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကိုဘီလူးကို အကူအညီတောင်းပြီးပြန်တင်ခိုင်းရင်တော့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် mco မှာ ရေးပေးထားတာရှိပါတယ်။ ဒီက admin တွေခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို ကျွန်တော် ဒီမှာ ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြု၊ မပြုကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား
9 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 6th January 2010, 6:45 pm
ပြန်လည်ဖော်ပြတာက ရပါတယ်ခင်ဗျာ..အစ်ကိုကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဆိုရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး.တစ်ခြားတစ်ယောက်က ရေးတာဆိုရင်တော့ Credit ပေးပြီး ဖော်ပြလို့ရပါတယ်...
10 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 6th January 2010, 6:47 pm
မူရင် လင့်က တော့ နိုင်ငံခြား forum တခုကပါ။ သူ့ကိုလည်း credit ပေးပြီးသားပါ။
ဒါဆိုလည်း thread အသစ်တခုဖွင့်ပြီး အခုပဲ တင်လိုက်ပါပြီဗျာ။
11 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 26th February 2010, 12:27 pm
subnet software ကို ဒေါင်းလို့ မရပါ expire ဖြစ်နေပါတယ်
12 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 28th February 2010, 2:46 pm
Subnet Mask အကြောင်း လေ့လာချင်ရင် မြန်မာလို ဖတ်လေ ခက်လေဘဲ
IP.Address.Calculator ကို ဒီလင့်ကဒေါင်း .....
13 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 28th February 2010, 2:52 pm
ဒါက အလွယ်ဆုံး Table တွေ Class တွေခွဲပီးသား
14 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 4th June 2010, 1:39 pm
Thanks ko kyawzwathant. အလွတ်ကျက်လိုက်ပါ့မယ်....
15 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 16th June 2010, 10:54 pm
subnet ရဲ့ကောင်းကျိုးလေ သိ သလောက် ပြော မယ် နော် .. မှား ရင် လဲပြော အုံး ..
Gateway router ၂ လုံး ချိတ် တဲ့ အခါ မှာ subnet ၂ bit ယူ လိုက် ရင် Ip4လုံး ထွက် လာ တယ်
အဲ ဒီ မှာ .. Broadcast address နဲ့network address all '0' example (192.1.0.0)
ဒီသုံး လို့မ ရ တဲ့2ခု ကို ဖယ် လိုက် ရင် IP က နှစ်ခု ပဲ ကျန်တယ် .. ISP မှာ ရှိတဲ့ router မှာ ၂ ခု ထဲ က တစ် ခု ပေး .. ကိုယ့် ရုံး မှာ ရှိတဲ့ router မှာ ကျန်တစ်ခု ကို ပေး လိုက် ရင် .. hacker က သူ ၀င် ပို့IP add မကျန်တော့ ဘူး ...
နောက် တစ် ခု က တော့ ... VLSM (Variable Length Subnet Mask) လို့ခေါ် ပါ တယ်
အဲ ဒါ က တော့ cisco တွေ မှာ ပါတ ယ်
အဲ .. ဒီအပိုင်း မှာ ကျတော့ .. ကျွန်တော် တို့network စ လေ့လာ တုံန်း က class A B C တွေ မ ရှိ တော့ ဘူး ... 172.1.1.1/24 လဲ ဖြစ် သွား မှာ ပဲ .. အမှန်ဆို ရင် /16 ပဲ ဖြစ်က မှာ လေ (သေ ချာ မ တွက် ထား ဘူး နော် ဥပမာ ပေး တာ) အဲ ဒါ ရဲ့အကျိုးကျေး ဇူး က တော့ .. network address waste ဖြစ် တာ ကို လျှော့ တာ ပဲ .. နောက် WAN desing မှာ VLSM ကို သုံး ရင် .. network loading နဲ့CPU Cycle တွေ က သိ သိ သာ သာ ကြီး... လျှော့ နဲ သွားတယ်.. ကို ပရို ကြီး များ ကို မေတ္တာ ရပ်ခံ ချင် တယ် .. Summarization အကြောင်း လေးဆွေး နွေး ပေးကျ ပါ အုံန်းလို့ 
မြန်မာ ပြည် မှာ့ငပိန် လေ
16 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 23rd June 2010, 7:55 pm
ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင် NE မှာဒါကအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါတယ်ဗျ။ ကိုယ့် Network လုံခြုံမှုကို
ဦးစားပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဒါတွေကိုလဲလေ့လာထားမှရမယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ရဲ့
လုပ်ငန်းမှာသုံးနေတဲ့ Network ကို ပိုပြီးမြန်ဆန်မှုရှိအောင်လဲလုပ်နိုင်တဲ့အထဲမှာ ဒါကလဲပါတယ်လို့
ထင်တယ်။ IPV4 ကို လေ့လာနေကြသလို နောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ IPV6 ကိုလဲမေ့မထားကြပါနဲ့အုံး
[You must be registered and logged in to see this image.] မှားရင်စိတ်ဆိုးပြီး ၀ိုင်းလဲမရိုက်ကြနဲ့အုံးနော်။
17 WildPackets IP Subnet Calculator on 5th September 2010, 8:39 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-10
အခုအစ်ကိုတို့တင်ထားပေးတဲ့ လင့်ခ်တွေက တစ်ခုမှဒေါင်းရတာအဆင်မပြေတာလို့...
WildPackets IP Subnet Calculator လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
18 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 7th October 2010, 2:05 pm
ဖြစ်နိူင်ရင် Subnetting ကို manual တွက်နည်းလေး မြန်မာ ebook ရှိရင် တင်ပေးကြပါလား.........
19 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 11th November 2010, 12:33 pm
Manual တွက်နည်းလေးပါ......မှား၇င်လည်း ပြင်ပေးပါ.....ရှိပြီးသားဆိုလည်း ဖျက်လိုက်ပါ....စိတ်ဆိုးပါဘုး.....Example. 203.64.32.0/27(24 ထိ၇နိုင်တယ်လေ) 27-24=3
၁.2ပါဝါ (n)2ပါဝါ 3=8(Network အေ၇အတွက်ပေါ.)
၂.2ပါဝါ h -22 ပါဝါ 5(0အေ၇အတွက်ပါ) -2=30 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1110 0000
၃. 255 . 255. 255. 244၄. 255 - 244 =32 (နှစ်ခုသုံးမ၇ 30 ထိသုံးနိုင်)
၄. Network Address က 203.64.32.0(+32)
၅. Valid IP Address က 203.64.32.1 to 203.64.32.30 ထိသုံးနိူင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကို ၃၂ ပေါင်းပြီး သူရှိသလောက်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ၂ ခုကတော.သုံးမ၇ဘုးပေါ.ဗျာ။
၆. Broadcast Address က ၃၂ ကို ၁ နှူတ်ပြီး 203.64..32.31 to.......Hint : ကျွန်တော်မေ၇းဘူးလို.မှား၇င် တောင်းပန်ပါတယ်..........
20 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking] on 10th December 2010, 1:07 pm
အပေါ်က ရေးထားတာတွေကို သိမ့်နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
21 Re: Subnet ခွဲဖို့ [Networking]